Olee otú ọtụtụ kilomita bụ 5 Boro Bike Tour? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Nyc igwe njegharị map 2017 - olee otu ị ga-esi kpebie
Nyc igwe njegharị map 2017 - olee otu ị ga-esi kpebie
Olee otú ọtụtụ kilomita bụ 5 Boro Bike Tour?
Ebee ka njem njem ise nke ise na-amalite?
Kwa afọ, ọtụtụ iri puku ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-aga n'okporo ámá — nke, maka ụbọchị, na-enwe obi ụtọ na-enweghị ụgbọ ala-maka TDIse Boro Bike Tour, na 40-mailijaunt nke na-agafe obodo New York ọ bụlaime obodo.Ọnwa Ise 2, 2019
Bikezọ igwe kwụ otu ebe mepere emepe na NY?
Routezọ ahụ na-amalite na Lower Manhattan, gafere ugwu site na Isi nke isii site na ime nke Central Park wee gaa Harlem na Bronx site na Madison Avenue Bridge. -Banyeghachi Manhattan, ọ na-aga ndịda n'akụkụ Osimiri East na FDR Drive.
Anyị niile anaghị ebi na paradaịs ịnyịnya ígwè, mana anyị nwere obere etu anyị ga-esi nwe opekata mpe otu ụzọ gafere ịnọ n'okporo ụzọ dị jụụ ma dịkwa ụtọ. Yabụ n'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ịhazi ụzọ, otu esi eji teknụzụ anyị nwere ugbu a ịchọta ụzọ ọhụrụ dị mma ịkwọ ụgbọala wee soro ha, yabụ ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ n'egwuregwu ahụ ma na-eche etu ị ga-esi mesoo okporo ụzọ ndị na-ekwo ekwo nwere ike gbanahụ. You're na-achọ okporo ụzọ ọhụụ ka ọ wee mee ka ụzọ ndị a ma ama mara.
Olileanya isiokwu a na-enyere aka! Yabụ kedu ụzọ dị mma iji gafere? Ihe ntakịrị dabere na ihe masịrị gị: Enwere m mmasị ịrịgo na ịrịgo ugwu ma ọ bụrụhaala na ha esighi elu, ana m ekele gị nke ukwuu. Ndị ọzọ na-enwe mmasị iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ na-anya ọsọ ọsọ ọsọ ka ha nwere ike. Ya mere, anyị hapụrụ gị ụdị ụzọ a ị ga-eme atụmatụ.
ihe bu strava na fitbit
Agbanyeghị, ihe zuru ụwa ọnụ n'etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè niile bụ ịhụnanya nke ụzọ dị jụụ, nke dị jụụ ma dịkwa jụụ, mana ọ kwesịrị ịbụ: agbakwala ebe ị na-anya ụgbọala m na-ekwu ọzọ ka ị rụpụta: ebula ebe ị na-anya ma ọ bụ ebe ị na-anyaghị ebe ị na-anya! Enwere m ọtụtụ ebe m bi na UK. Echere m na ndị mmadụ maara ụfọdụ ụzọ dị mkpa si n'obodo na ime obodo ma ha maara ha n'ihi na ha na-akwọ ha Na site na akpu ụgbọ ala gị, ha nwere ike ịmasị mara mma: ịma mma mara mma, okporo ámá ndị mara mma, okporo ụzọ na-agagharị ngwa ngwa na ihe na-agaghị amasị ! Ọfọn, okporo ụzọ na-agagharị ngwa ngwa iji malite: okporo ụzọ ndị a adịghị mma maka ịgba ịnyịnya ígwè mana ọ na-abụkarị ndị jupụtara na ndị na-agba ịnyịnya okporo ụzọ togba ịnyịnya Nke a bụ ebe teknụzụ na-abata ya mere enwere ụzọ ole na ole raara onwe ha nye ịchọta ngwa na weebụsaịtị anyị jiri ebe a na GCN onye a na-akpọ 'Komoot' na ha nwere a free free version na a adịchaghị nhọrọ oke. Ọ dị oke mfe.
Yabụ ugbu a, anọ m na weebụsaịtị gị. M pịa na peeji nke nhazi ụzọ. Enyere m ebe m malitere, cafe mara mma nke m maara, m wee tinye ebe ọ bụ ụlọ ahịa tii kacha mma, zụta akwụkwọ na Komoot mere ihe ndị ọzọ m maara site na ahụmịhe na ndị a bụ n'okporo ámá m ga-ahọrọ, na Komoot hụrụ ha n'ihi na o nwere ụdị algorithms niile nwere ọgụgụ isi, data ọ nwere ike ịnweta site n'aka ndị ọrụ ya na kwa ihe ndị a na-akpọ isi ebe ahụ nke ndị mmadụ nwere mmụọ na-ahapụ ma duzie m ka m kwenye nnukwu ihe maka ndị na-agba ịnyịnya.
Yabụ na nke a n'okporo ụzọ amamiihe sitere na Portbury ruo Clevedon ugbu a ka ị nwere ike ịhụ bụ ebe dịpụrụ adịpụ, ugbu a ọ dị m ka ụzọ ụzọ na-ada ụda nke na-ada ụda nke ukwuu yana mgbe oge ụfọdụ ị ga-ahụ Komoot n'ụzọ nkịtị ọrụ arụmọrụ mepụtara. Ugbu a enwere ọtụtụ obere nhọrọ ndị ọzọ ebe a igwu egwu gụnyere gụnyere ụdị ụzọ ịchọrọ. N'ihi ya, m gbara ịnyịnya ígwè nke na-abụkarị okporo ụzọ dị jụụ n'ebe ahụ na-enyekwa m gravel ma ọ bụ ọsọ ọsọ ọsọ, ụzọ m si dị: na nke a 44,1 kilomita, ọ na-agwa m oke ịrịgo ebe na ebe ọ na-aga. ruo, na profaịlụ elu ahụ dị n'okpuru ebe a ma ọ na-enye m oge e mere atụmatụ na nke ahụ dabere n'otú m si eche na m bụ, dịka ị pụrụ ịhụ, enwere m ụdị onwe m maka humwell, ezigbo mmesapụ aka nyocha nke m E kpebiri ahụike.
E nwere ụzọ atọ ị ga - esi soro ụzọ a: Nke mbụ bụ ụzọ ochie - ụlọ akwụkwọ, ebe ị ji nlezianya dee ntuziaka ntụgharị site na nke m abanyeghị na mpempe map nke ga - eme ka mmiri na ọsụsọ wee jide n'aka na ihe kpatara na ị na- achọghị ime nke ahụ ọzọ. Kama, ịnwere ike iji ekwentị gị dị ka ụdị ngwaọrụ igodo.So Komoot nwere ngwa ma mgbe m pịa njem m, igodo ntụgharị site na ntụgharị na-amalite ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ekwentị m n'akpa ma ọ bụ anya mgbe m nwere ugwu, nke na-enye m ohere ịpị ekwentị m na aka m Usoro atọ bụ iji kọmputa igwe kwụ otu ebe GPS dị ka nke a Ya mere, nke a bụ Wahoo, na n'ezie m nwere ike ịmekọrịta ya na akaụntụ Komoot m, nke pụtara na m nwere ike track my Komoot route at the push of a button Ọ bụrụ na ị chọrọ ime a obere ọzọ nnyocha n'ime gị zubere njem tupu ị na-aga, ma eleghị anya n'ihi na ị na-aga ebe ahụ, ya mere, e nwere ihe a obere ihe na ya, ị tinyekwara ego ọzọ, Ekwadoro m Google m na-eji nke a oge niile, ọtụtụ ya, maka eserese, mana n'ezie ọ bara oke uru mgbe naanị ị nwere otu You nwere ike ị nweta echiche nke ụzọ dị ka ya, ọbụlagodi ihe paịlị bụ yana ọnọdụ okporo ụzọ n'ihi na ị nwere ike ijide n'aka na ụgbọ ala Google Street View na-akpata mkpọtụ okporo ụzọ ever ochie ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ime ya kwa, nke bụ otu ọkọlọtọ na-acha uhie uhie na o doro anya na ọ dị mfe iji.
Echeghị m na m kwesịrị ịkọwa. Mana agbanyeghị ego ị na-adọkpụrụ onye mmanụ oroma n'okporo ámá ị chọrọ ịlele na nke a amamiihe alleys Portbury na Clevedon ma site na ụzọ gbaghara onwe gị n'echiche nke ịntanetị m. Oh, ka anyị gaa: 'enweghị nghọta'.
Ọmarịcha Lane Portbury na Clevedon, nke ahụ dị mma. Na ngwụcha, ihe ọmụma gbasara obodo bụ ezigbo akụ na-eche ka a gwuo ya, ọ bụrụ na dijitalụ na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ na ndụ n'ezie - ndị mmadụ na-aga ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị, nke bụ ọla edo mgbe niile, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ klọb igwe kwụ otu ebe, kwa naanị ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ahụkarị nke ị hụrụ na ahụmịhe m nwere obi ụtọ karịa ịkọ nkata gbasara ụzọ gasị ka ị nwee ike mee ọtụtụ ihe na ya wee kesaa ndụmọdụ gị ma enwere m obi ike na ị wuru otu Mee okporo ụzọ okporo ụzọ dị egwu wee wulite ịkwa akwa. -machaa loops. Ọ bụ kpọmkwem ihe na-atọ gị ụtọ na ebe ị na-etinye oge ị na-etinye n'okporo ụzọ na-arụsi ọrụ ike ruo opekata mpe.
Enwere uzo uzo ugboala na NYC?
Ọ bụ ezie na Alaeze Ukwu AlaezeNzọ ụkwụfoduruimeghemaka ije nana-agba ọsọ, A na-agba ndị New Yorkers ume ka ha nọrọ n'ụlọ ma megharịa ahụ na mpaghara.
Ka anyị chee ya ihu: ị nwere ike ịnweta ọnụ ụzọ. Ma ọ bụ ụgbọ ala kụrụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè na New York City na 2000s ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-agbapụ na mgbapụ Site na New York Ma eleghị anya ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu na-enweghị atụ, ọ dịịrị gị mma n'ihi na ị gbapụrụ ụgbọ ala, ọ bụghị Ebe ị ga-enweta Ahụhụ Na-agagharị Na-agagharị Taa, New York City na-ahụ ihe mgbawa na-agba agba ịnyịnya ígwè.
Yabụ kedu otu obodo si nweta ụdịrị njem a? ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ogbe ndịda? Site na 2007 rue 2013 Janette Sadik-Khan duuru Ngalaba Transportgbọ njem New York. Enwere m ọrụ maka 6,000 kilomita nke okporo ụzọ, àkwà mmiri 789, ụzọ mgbaàmà 12,000, akara ngosi ụzọ nde 1.3, anyị etinyela kilomita 400 nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè, gụnyere otu n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ echedoro na United States, anyị wee ọ dị na 9th Avenue n’etiti 23rd Street na 16th Street.
Zọ a dị mkpa n'ihi na ọ bụ usoro nchedo ogige oge gboo. Ọ nwere ọtụtụ nrụgide karịa ọdịnala mana nrụnye abụwo arụmụka. Maka na imepụta oghere maka ụzọ ndị echedoro ga-ewepụ oghere ndị na-adọba ụgbọala.
Ọ bụrụ n ’ị na-ele anya maka ụkpụrụ okporo ụzọ, ị ga-ahụ usoro ọzọ. Enwere uzo zuru ebe a na-adọba ụgbọala na blọk nwere aka nri, mana ọ bụrụ na ị tụgharịa aka ekpe, a ga-achụ ebe ndị ahụ na-adọba ụgbọala maka ihe mgbochi, ụgbọ ala ga-echere ebe a n'akụkụ ụzọ igwe kwụ otu ebe, Ihe mgbaàmà dị iche iche maka ụgbọala na igwe kwụ otu ebe ga-ama jijiji iji belata nrụgide dị na nkwụsị. Ihe data ahu gosiri na uzo uzo 9th Avenue wetara uru aku na uba, mmeghari na nchekwa.
mmega emeziwanye ụra
Ndị igwe kwụ otu ebe wee nwee usoro nke ha, ya mere ọ bụ mmeri maka bọs, ọ bụ mmeri nye ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọ bụ mmeri nye ndị mmadụ n'ụkwụ. Ọ bụkwa mmeri nye ndị mmadụ na wiil abụọ. Nke ahụ setịpụrụ ntọala maka ihe niile sochiri.
Mgbe obodo ahụ nyochara data onye ọkwọ ụgbọ ala nke 9th Avenue, ọtụtụ kilomita nke okporo ụzọ echedoro New York gbawara. Site na 2018 obodo ahụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 1,200 nke ụzọ igwe kwụ otu ebe. E chekwara otu narị mmadụ n’ime ha.
Maka na anyị enweghị ike ịnabata ọtụtụ nde mmadụ site na ịpịpụ okporo ụzọ na okporo ụzọ anyị ugboro abụọ. Ingmepụta n'okporo ámá maka ndị na-eme ka ọ dị mfe ịnya ịnyịnya ígwè, ịga ije na bọs - nke ahụ bụ usoro maka ọdịnihu nke obodo. Obodo ndị ahụ na-etinye ụdị itinye ego na mgbanwe ndị a bụ obodo ga-etolite ma nwee ọganiihu na narị afọ a.
Mana iji dọta ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, obodo chọrọ netwọọdụ nke usoro okirikiri na okporo ụzọ dị ala. Nwere ike ọ bụghị naanị ịgba sharks n'okporo ámá na voila, na-atụ anya ka ndị mmadụ malite ịgba ígwè. Ọ ga-abụ a pụrụ ịdabere na usoro na ọ nwere na-mma.
Ọ bụrụ na ị lelee ahụike nke ụzọ igwe kwụ otu ebe na netwọkụ ịnyịnya ígwè anyị, ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na ụmụaka ji igwe kwụ otu ebe; mgbe ị hụrụ ụmụnwaanyị na ụmụaka n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe na ezinụlọ n'ụgbọala igwe kwụ otu ebe, ị mara na ọ dị mma. Ezinaụlọ, n'etiti ndị ọzọ, ga-adaba na otu nwere mmasị mana na-echegbu onwe ha na tebụl a. O sitere na ntuli aka na Oregon.
Mana nkwekọrịta njem na-egosi na otu a na-anọchite anya ikike enweghị ikike maka obodo ndị dị njikere ịkwalite ịgba ịnyịnya, nnukwu ihe na-akpata ọganihu ịgba ọsọ igwe na-agba ọsọ na New York. Ma ọ dịkwa ọnụ ala. Know mara, ụzọ igwe kwụ otu ebe mebere 99% nke isi okwu anyị, mana naanị 1% nke mmefu ego.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbaa ịnyịnya ígwè gburugburu Central Park?
Mkpokọta anya nke Full Loop bụ 6.1 kilomita ọ na-ewe ọtụtụ ndị mmadụ ihe dị ka minit 45 ruo 60 na CitiIgwe kwụ otu ebe.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbaa okirikiri kilomita 40?
Gbaa ịnyịnya 1: New ka egwuregwu, ride anya odika40 kilomita. Mgbalị dị ala (na-edebe ya na mpaghara ntachi obi). Ije ije ihe dị ka 13mph. Ngbaji were ihe elekere ọ bụla.
New York City igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụrụ na ụzọ ahụ dị warawara nke ukwuu maka aigwena ụgbọ ala ịga njem n'enweghị nsogbu n'akụkụ, ị nwere ikike ịgba n'etiti ụzọ njem. Enwere ike ịgba ịnyịnya ígwè na isi n'okporo ámá niile na mpaghara niileObodo, ọbụna mgbe enweghị ụzọ a họpụtara ahọpụta dị.
Kedu ihe bụ oge 1 nke imeghe New York?
Oge 1nkeimeghena-enye ohere iwu saịtị na ụfọdụ ụlọ ahịa na-ere ahịa iji rụọ ọrụ ọzọ na nkpuchi achọrọ na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na a na-aga n'ihu ịchọta akara ngosi, a ga - enwekwu azụmaahịa - gụnyere ụlọ nri na oghere dị n'èzíimegheghachin'imeAdọabụọ.June 8. 2020bọchị 2020
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnya ịnyịnya ígwè na-enweghị okpu agha na NY?
A. NaNew YorkSteeti, ndị ịnyịnya ígwè niile na-erubeghị afọ iri na anọ chọrọ ka ha eyi uwe enyere nchekwaokpu igwemgbe ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ ndị njem na ịnyịnya ígwè (Nke abụọokpu igwenanọkwasin'oche oche ụmụaka echepụtara nke ọma.
Ime igwe kwụ otu ebe ga-akwụsị na ọkụ uhie na NYC?
Gbaa ịnyịnya naokporo ụzọ, ọ bụghị imegide ya.Kwụsị na ọkụ uhienaKwụsịihe ịrịba ama. Naacha uhie uhie, chere awawaọkụna / ma obuigwe kwụ otu ebema ọ bụ mgbaàmà ndị ji ụkwụ aga. Soro ije gawa, belụsọ na enwereigwe kwụ otu ebemgbaàmà ma ọ bụ akara aka, gafere ebe ụzọ gafere, mgbe akara aka na-egosi ụkwụ.
Kedu mgbe njem njegharị nke New York City?
N’ụbọchị Sọnde izizi n’ọnwa Mee, ndị ịgba ịnyịnya ígwè 32,000 nke ọkwa nka niile siri n’akụkụ ụwa niile gafere site na mpaghara niile nke New York City n’okporo ụzọ enweghị ụgbọala. Maka otu ụbọchị, okporo ụzọ bụ nke gị, akwa ndị ahụ bụ nke gị, Obodo bụ nke gị-ọ nweghị ụzọ ka mma iji nweta Big Apple.
Kedu mgbe njegharị igwe kwụ otu ebe Boro na NYC?
Banyere njem njem ise nke Boro. N’ụbọchị Sọnde izizi n’ọnwa Mee, ndị ịgba ịnyịnya ígwè 32,000 nke ọkwa nka niile siri n’akụkụ ụwa niile gafere site na mpaghara niile nke New York City n’okporo ụzọ enweghị ụgbọala. Maka otu ụbọchị, okporo ụzọ bụ nke gị, akwa ndị ahụ bụ nke gị, Obodo bụ nke gị-ọ nweghị ụzọ ka mma iji nweta Big Apple.
Ugboro ole ka igwe kwụ otu ebe dị na New York City?
ỌT OFT OF NKE CYCLISTS 1,240lane kilomita nke igwe kwụ otu ebe nke arụnyere na New York City dịka nke 2018 • kilomita 66.1lane nke arụnyere na 2018 480lane kilomita nke ụzọ ụgbọ ịnyịnya ígwè echedoro nke etinyere na New York City dị ka nke 2018 • 20.4nke igwe kwụ otu ebe awụnyere na 2018 A Snapshot Obodo